JTWC မှ INVEST 92B မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် MEDIUM သို့ ပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပြီ « MMWeather Information BLOG
« INVEST 92B အား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း – ၄ MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ .. »
JTWC မှ INVEST 92B မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် MEDIUM သို့ ပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပြီ
By mmweather.ygn, on May 23rd, 2014
ယနေ့ နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၉ နာရီတွင် JTWC မှ INVEST 92B ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်အား ပယ်ဖျက်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့ ခန့်မှန်းချက်များအရ မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အားနည်းသွားပြီဖြစ်သဖြင့် လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း INVEST 92B မှ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေအဆင့်အား “Medium” သို့ လျှော့ချလိုက်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပါရှိပါသည်။
TROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT CANCELLATION ..
THIS CANCELS REF A (WTIO21 PGTW 220730). THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 16.5N 91.6E IS NOW LOCATED NEAR 16.2N 91.0E, APPROXIMATELY 370 NM SOUTH OF CHITTAGONG, BANGLADESH.
RECENT ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY SHOWS PATCHY DEEP CONVECTION FLARING AND DISSIPATING OVER THE WESTERN PORTION OF A LOW-LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) EVIDENT IN A 222238Z SSMIS PASS.
THIS DISTURBANCE HAS WEAKENED SLIGHTLY OVER THE PAST TWELVE HOURS IN RESPONSE TO PERSISTENT VERTICAL WIND SHEAR INDUCED BY THE PERIPHERAL FLOW AROUND AN UPPER-LEVEL RIDGE TO THE NORTH.
EASTERLY VERTICAL WIND SHEAR IS EXPECTED TO IMPACT THE SYSTEM FOR THE NEXT 24 HOURS, RENDERING THE FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IN THAT TIME FRAME UNLIKELY.
MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 20 TO 25 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1002 MB.
BASED ON THE OBSERVED WEAKENING TREND AND CONSIDERING THE POTENTIAL FOR REDEVELOPMENT IF VERTICAL WIND SHEAR RELAXES OVER THE NEXT FEW DAYS, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS DOWNGRADED TO MEDIUM.
မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း INVEST-92B, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « INVEST 92B အား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း – ၄ MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ .. »
1 comment to JTWC မှ INVEST 92B မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ အဆင့် MEDIUM သို့ ပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပြီ
Log in to Reply	.
« INVEST 92B အား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း – ၄ MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ .. »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum